China Incubator သည် Industril စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးစက်ရုံနှင့် ပေးသွင်းသူများအတွက် သင့်လျော်သည်။ မိုင်းတုံ
Hot Galvanized Wire Mesh H-Type Layer Cage
အရည်အသွေးမြင့် အလိုအလျောက် H အမျိုးအစား အသားစားကြက်လှောင်အိမ်
အလိုအလျောက် H အမျိုးအစား ကလေးကြက်လှောင်အိမ်
အရည်အသွေးမြင့် Galvanized Wire Quail Cage
Ventilation Cooling Pads အသုံးပြုထားသော ကြက်မွေးမြူရေး
Incubator သည် စက်မှုလယ်ယာစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးအတွက် သင့်လျော်သည်။
incubator ၏ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် မျက်နှာပြင်ခုနစ်ခုပါ ထိန်းချုပ်ကိရိယာဖြစ်သည်။ စနစ်နှစ်ခု၏ အားသာချက်မှာ စနစ်ကျရှုံးသည်နှင့် လည်ပတ်မှုကို သေချာစေရန်နှင့် ဆုံးရှုံးမှုများကို လျှော့ချရန်အတွက် ဒုတိယစနစ်သို့ အလိုအလျောက်ပြောင်းသွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အကြီးမားဆုံးအားသာချက်မှာ ဒုတိယစနစ်သည် စိုထိုင်းဆကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ စိုထိုင်းဆ သို့မဟုတ် အပူချိန် အလွန်မြင့်သည် သို့မဟုတ် နိမ့်လွန်းသောအခါ၊ စနစ်2သည် အလိုအလျောက် အချက်ပြပြီး သက်ဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများကို တစ်ချိန်တည်းတွင် ရပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
1.Incubator ၏ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် မျက်နှာပြင်ခုနစ်ခုပါ ထိန်းချုပ်ကိရိယာဖြစ်သည်။ စနစ်နှစ်ခု၏ အားသာချက်မှာ စနစ်ကျရှုံးသည်နှင့် လည်ပတ်မှုကို သေချာစေရန်နှင့် ဆုံးရှုံးမှုများကို လျှော့ချရန် ဒုတိယစနစ်သို့ အလိုအလျောက်ပြောင်းသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ အကြီးမားဆုံးအားသာချက်မှာ ဒုတိယစနစ်သည် စိုထိုင်းဆကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ စိုထိုင်းဆ သို့မဟုတ် အပူချိန် အလွန်မြင့်သည် သို့မဟုတ် နိမ့်လွန်းသောအခါ၊ စနစ်2သည် အလိုအလျောက် အချက်ပြပြီး သက်ဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများကို တစ်ချိန်တည်းတွင် ရပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
2. ဥများကိုလှည့်ခြင်း- မိနစ် 90/တစ်ကြိမ်၊ ကြက်အခွံမှထွက်ခါနီးတွင် လှည့်ခြင်းကိုရပ်ပါ။
3. အပူချိန်ကို ချိန်ညှိပါ- set ကိုနှိပ်ပါ၊ PP ပေါ်လာပါ၊ သတ်မှတ်ပါ။
စိုထိုင်းဆကို ချိန်ညှိပါ- set ကိုနှိပ်ပါ၊ HH ပေါ်လာပါ၊ သတ်မှတ်ပါ။
4. ပုံသေမုဒ်တွင်၊ မုဒ်ကို5စက္ကန့်ကြာ နှိပ်ပြီး ဖိထားပါ၊ ၎င်းသည် တစ်ခုပြီးတစ်ခု အလိုအလျောက် ခုန်ဆင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ ပေါက်ဖွားခြင်း၏ အပူချိန်သည် ရက်အရေအတွက်အားဖြင့် အလိုအလျောက် ပြောင်းလဲပါသည်။ ပါဝါပိတ်သောအခါ၊ အတက်အဆင်းသော့များဖြင့် ရက်အရေအတွက်ကို တိကျစွာချိန်ညှိပါသည်။
5. လက်ဖြင့် ကြက်ဥလှန်ခြင်း- လှန်ရန် တိုးရန်ခလုတ်ကို အကြာကြီးနှိပ်ပါ။
6. စက်နှိုးစက်- နှိုးစက်ကိုဖယ်ရှားရန် လျှော့ချခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
7. လျှော့ပါ၊ တိုးပြီး စက်ရုံဆက်တင်များကို ပြန်လည်ရယူရန် တစ်ချိန်တည်းတွင်5စက္ကန့်ကြာ နှိပ်ပါ။
8. Incubator ၏ အပူချိန်သည် သတ်မှတ်အပူချိန်၏ အထက်ကန့်သတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်သောအခါ၊ အပူချိန်လျှော့ချရန်အတွက် အိတ်ဇောပန်ကာကို ထိန်းချုပ်ပြီး စတင်သည်။
9. လေဝင်လေထွက်ပေါက်များ- အစောပိုင်းအဆင့်တွင် စုစုပေါင်းအရေအတွက်၏ 1/3 ကို ကောင်းစွာဖွင့်ထားသင့်သည်၊ 2/3 သို့မဟုတ် အားလုံးကို နောက်ပိုင်းအဆင့်တွင် အခြေအနေအရ ဖွင့်နိုင်သည်၊ နွေရာသီအပူချိန်သည် မြင့်မားသည်၊ အားလုံးပွင့်သည်၊ လေဝင်လေထွက်ပေါက် အရေအတွက်အလိုက် စိုထိုင်းဆကိုလည်း ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
10. အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာ- ဆလင်ဒါပုံ၊ သံမဏိ
စိုထိုင်းဆအာရုံခံကိရိယာ- cuboid၊ ပလပ်စတစ်အိတ်
အားလုံးကို ရေနှင့်မထိတွေ့ဘဲ သေတ္တာအလယ်တွင် ထားရှိပါ။
11. ဥဥခြင်း- သေးငယ်သောအစွန်းနှင့် အဆုံးကြီးများသည် ရှင်သန်မှုနှုန်းမြင့်မားလေ၊ ပေါက်နှုန်းမြင့်မားလေ၊
DC-AC13 အင်ဗာတာ- 12V လျှပ်စစ်အား 220V သို့ ပြောင်းပါ။
တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်းကို DC-AC တစ်ခုတည်းသော လက်ရှိအဖြစ်သို့ ပြောင်းပါ။
သေတ္တာ၏အထူမှာ 5CM ဖြစ်ပြီး အပူကိုထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်ခြင်းနှင့် ရေစိုခံခြင်း စသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များပါရှိသည်။
နောက်တစ်ခု: Intelligent Breeding Ventilation Fan
H အမျိုးအစား ကြက်လှောင်အိမ်
Liaocheng တက္ကသိုလ် အနောက်ဘက် တံခါး၏ မြောက်ဘက် မီတာ 100 အကွာ၊ Dongchangfu ခရိုင်၊ Liaocheng City၊ Shandong ပြည်နယ်